Shiinaha BPA Bilaashka ah ee Mr Shaaha FDA caadiga ah Silicone Shaaha infuser Man oo leh xirmo baakad diyaar ah Soo saare iyo Alaab-qeybiye | Jingqi
BPA Bilaashka ah ee Mr Shaaha FDA heerka silicone Shaaha Man oo leh sanduuq baakad ah ayaa la heli karaa
8 * 6.5cm
Magaca badeecada BPA Bilaashka ah ee Mr Shaaha Cuntada Shaaha oo dhammeystiran qaabka shaaha cufnaanta shaaha
cabir 8 * 6.5CM
culeys 30g / pc
xirmo: Boorso 1pc / opp 500 oo kartoonkiiba
cabirka kartoonada 44 * 39 * 34CM
Heerkul -40 ~ 230 ° C
FADLAN & FADLAN: Keydso qashinka oo ku dar wax yar madadaalo waqtigaaga shaaha MR. TEA! Naqshaddan soo jiidashada leh waa hab-dab-damis oo kaa dhigaya inaad dhoola caddayso! Kuxiran santuuq midab leh oo u wanaagsan hibo.
SIDII AAD U ISTICMAALO: Kaliya waxaad ku tuurtaa shaaha caleenta dabacsan ee shaashadiisa waxaadna ku dhejisaa koobkaaga si aad ugu raaxeyso shaaha si fiican loo soo saaray!
NADAALADA HALIS AH: Kadib isticmaalka, iska tuur caleemaha shaaha dabacsan oo ku mayr biyo kulul. Curiyayaasha shaaha silicone-ka ee loo yaqaan 'silicone infuse' sidoo kale waa weelka dhaqa iyo mikrowaveku!
DHAQAN-GELIN & CUDUR: Jid-dhiska-ku-soo-celinta ee bacaha shaaha caadiga ahi waxay ku darsadaan tiro qashin ah qashin-qubka mana u waari karaan adduunkeenna. Fred oo dib loo isticmaali karo shaah silikoon ah oo loogu talagalay shaah caleen dabacsan ayaa ah kan ugu fiican, bedelka eco-saaxiibtinimo! Waad cabi kartaa isla cabitaan shaah ah oo aan qashinka ahayn!
Alaabtaani waa mid weelka dhaqa iyo mashiinka microwave aamin ku yihiin.
Su'aal Macmiil & Jawaab
1. Maxaad silicone u isticmaashaa caafimaad? Ma haysataa shahaadada tayada leh?
A: Xaqiiq, silicone-ka aan isticmaaleyno waa silicone saafi ah oo dabiici ah, ma-sun ah, waxyeello kuma laha dadka,
Waxaan haynaa LFGB, FAD, CE, SGS, shahaadada tayada ee ROHS ee maadada.
2.Waa maxay lacag bixintaada la aqbali karo?
3. Miyaa layba qaadi karaa?
A: Waa hubaal, Waarayn kartaa shaybaarka, hase yeeshe waxay u baahan tahay khidmooyinka muunadda iyo qiimaha dhoofinta.
waana la soo celin doonaa ka dib markii la dhigo tiro la cayimay.
4. Shakhsi ahaan ma u diyaarin karaa alaabta?
A: Haa, waxaan u samayn karnaa shaqsi ahaaneed alaabada silicone
5. Maxay yihiin xulashooyinka habka xirxiridda?
A: Boorsada OPP, Sanduuqa Maqaarka, Sanduuqa Kaarka waraaqaha ah ama xirmo xirxiran
6: Ma isku dari karaa nidaamka? Miyaad pls ii siin kartaa qiimo dhimis hadii aan waxbadan iibsado?
A: Dhibaatada maaha, kala-darka nidaamka, midab kasta oo PMS ah ayaa gebi ahaanba la soo dhaweynayaa, inta badan ee QTY aad ku amarto qiimaha hoose ee aad hesho.
7: Waa maxay habka dhoofinta?
A: habka dhoofinta HL, UPS, Fedex, TNT. Dhoofinta Hawada iyo Soodhawaynta Badda.
8: Maraakiibta ma u diri kartaa bakhaarka Amazon?
A: haa, way sameyn kartaa.
Dhoofinta Hawada + gaarsiinta Fedex: 15 maalmood
Maraakiibta Badda + Gaarsiinta UPS: 35 ~ 40 maalmood
Qalabka jikada ee silicone,
Qalabka jikada ee silikone
Hore: FDA Super jilicsan oval Silicone Wejiga Nadiifinta Wejiga Nadiifinta Jirka iyo Wejiga
Xiga: Qaabka Ubax Ceyriyaha Sharafta Silicone Dharka Burushka loogu talagalay nadiifinta suxuunta iyo miraha
Qaabka Noocyada Badda ee Shark wuxuu qaabeeyaa Fasalka Silico ...
Qaboojiyaha Ice cream Silicone koob Cabbir aad u Weyn
17.5 * 12cm midabo badan oo nadiif ah oo saafi ah oo jilicsan ...
OEM Bourbon Spherical Ice Cube Tray Logg Printa ...
Nolvety Silicone Cake Hamsiceer Weelka Kushiinka ah ee Accesso ...
Qalabka Goobta Qalabka jikada ee Silicone Embosse ...